Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM Gen Andrew Gutti oo maanta xilka la wareegay
May 2, 2012 - Written by
Muqdisho:-Warsaxaafadeed ka soo baxay maanta xafiiska ciidanka AMISOM ayaa si rasmi ah u shaaciyey in taliyaha cusub ee AMISOM uu yahay Gen Andrew Gutti kaas oo xilka kala wareegay Gen Fred Mugisha taliyihii hore ee ciidanka AMISOM. Munaasabad uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee AMISOM Jen Andrew Gutti ayaa waxay ka dhac day Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana aad loo adkeeyey amaanka garoonka Aaden Cadde.
Taliyihii hore ee AMISOM, Jeneraal Fred Mugisha oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in muddadii uu xilka hayay ay ciidamada AMISOM ay guulo la taaban karo soo hoyeen wuxuuna intaas raaciyey in Degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM.
Jeneraal Fred Mugisha taliyihii hore ee AMISOM ayaa sheegay in khilaafka ku dhexjira xildhibaanka DFKM iyo kala aragti duwanaanta madaxada sare ee DFKM uu noqday caqabada ugu weyn ee uu la kulmay inta uu xilka hayey .
Taliyaha cusub ee AMISOM Jen Andrew Gutti oo ka hadlay munaasabada uu xilka kula wareegay ayaa waxaa uu sheegay in uu sii wadi doono howlaha ciidanka AMISOM waxaana goobta sidoo kale goobjoog ka ahaa wakiillo ka socday Midowga Afrika, , taliyaha ciidamada xoogga DFKM Gen Cabdulqaadir Sh Cali Diini iyo saraakiil kale oo ka tirsan AMISOM iyo DFKM.
Warsaxaafadeedkii ay AMISOM ka soo saartay taliyaha cusub ee AMISOM Gen Andrew Gutti hoos ka akhriso .
AMISOM Press Release 02-05-2012